ဝင်းနဲ့ ဇော်အတွက် ဘန်ကောက်အထိ အသနားခံ တောင်းဆိုဆန္ဒပြပေးဖို့ အသင့်ပဲဆိုတဲ့ ယုန်လေး – Askstyle
ဝင်းနဲ့ ဇော်အတွက် ဘန်ကောက်အထိ အသနားခံ တောင်းဆိုဆန္ဒပြပေးဖို့ အသင့်ပဲဆိုတဲ့ ယုန်လေး
ထိုင်းနိုင်ငံ လိပ်ကျွန်း(ခိုတောင်ကျွန်း) လူသတ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခြင်း ခံထားရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ဇောင်လင်းတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးအယူခံမှာ မပြောင်းလဲပဲ သေဒဏ်ကျခံစေရန် အမိန့်ချခဲ့တဲ့ သတင်းကတော့ လတ်တလော မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ရင်ကို ဆို့နင့်ကြေကွဲစေတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုပါပဲ။
ပြည်သူတွေလည်း အကောင်းဆုံး ကယ်တင်ဖို့ အတွက် ဆန္ဒပြင်းပြနေကြသလို၊ အနုပညာရှင်တစ်ချို့ကလည်း စိတ်မကောင်းစွာ ကူညီဖို့ အသင့်ရှိနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဆိုတော် ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ယုန်လေးကလည်း ဝင်းနဲ့ ဇော်တို့အတွက် လိုအပ်ရင် ဘန်ကောက်အထိ အသနားခံတောင်းဆိုသွားမယ်လို့ ထုတ်ပြောလာတာ ကြောင့် ပရိသတ်တွေလည်း အင်တိုက်အားတိုက် ပါဝင်ဖို့ တက်ကြွနေကြတာပါနော်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် လတ်တလော ပရိသတ်တွေကို ဝမ်းနည်းစေခဲ့တဲ့ ဝင်းနဲ့ ဇော်တို့ရဲ့အမှုအတွက် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီပေးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ယုန်လေးရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ယုန်လေးကတော့ “တကယ် ကြေကွဲပါတယ် .တကယ် မဟုတ်ပဲ လုပ်တာကို ငြိမ်ခံနေရင် ဒါ ဝင်း နှင့် ဇော် တွင်မဟုတ်ပါ ။မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ သိက္ခာပါ . လုပ်လို့ရလို့လုပ်တာဖြစ်သွားပြီ ။မြန်မာလူမျိုးများသာ် ထိုးကျွေးခံ ကျားစားများမဟုတ်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ် လောက်က ဆန္ဒပြရာတွင်လည်း တတ်နိုင်သလောက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်.ထိရောက်မယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာလူကြီးများကလည်းကြိုဆိုမယ်ဆိုရင် BKK ထိ အသနားခံ တောင်းဆို ဆန္ဒပြပေးဖို့ အသင့်ပါ။” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်မှာ ရေးသားဖော်ပြလာတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဝင်းနဲ့ဇော်ရဲ့ အမှုကိုတော့ (၄) နှစ်ကျော်မျှ စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးအယူခံကို ထိုင်းနိုင်ငံတရားလွှတ်တော်ချုပ်က ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၉) ရက်နေ့က သေဒဏ်ကျခံစေရန် အမိန့်ချခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ပါဝင်ပြီး ဝင်းနဲ့ ဇော်အတွက် ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
ထိုငျးနိုငျငံ လိပျကြှနျး(ခိုတောငျကြှနျး) လူသတျမှုဖွငျ့ တရားစှဲဆိုခွငျး ခံထားရတဲ့ မွနျမာနိုငျငံသား ဝငျးဇျောထှနျးနဲ့ ဇောငျလငျးတို့ရဲ့ နောကျဆုံးအယူခံမှာ မပွောငျးလဲပဲ သဒေဏျကခြံစရေနျ အမိနျ့ခခြဲ့တဲ့ သတငျးကတော့ လတျတလော မွနျမာပွညျသူပွညျသားတှရေဲ့ရငျကို ဆို့နငျ့ကွကှေဲစတေဲ့ အကွောငျးအရာတဈခုပါပဲ။ ပွညျသူတှလေညျး အကောငျးဆုံး ကယျတငျဖို့ အတှကျ ဆန်ဒပွငျးပွနကွေသလို၊ အနုပညာရှငျတဈခြို့ကလညျး စိတျမကောငျးစှာ ကူညီဖို့ အသငျ့ရှိနကွေတာ တှရေ့ပါတယျ။ အဆိုတျော ဒါရိုကျတာတဈဦးဖွဈတဲ့ ယုနျလေးကလညျး ဝငျးနဲ့ ဇျောတို့အတှကျ လိုအပျရငျ ဘနျကောကျအထိ အသနားခံတောငျးဆိုသှားမယျလို့ ထုတျပွောလာတာ ကွောငျ့ ပရိသတျတှလေညျး အငျတိုကျအားတိုကျ ပါဝငျဖို့ တကျကွှနကွေတာပါနျော။
ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ လတျတလော ပရိသတျတှကေို ဝမျးနညျးစခေဲ့တဲ့ ဝငျးနဲ့ ဇျောတို့ရဲ့အမှုအတှကျ တတျနိုငျတဲ့ဘကျက ကူညီပေးဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့ ယုနျလေးရဲ့အကွောငျးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ယုနျလေးကတော့ “တကယျ ကွကှေဲပါတယျ .တကယျ မဟုတျပဲ လုပျတာကို ငွိမျခံနရေငျ ဒါ ဝငျး နှငျ့ ဇျော တှငျမဟုတျပါ ။မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးရဲ့ သိက်ခာပါ . လုပျလို့ရလို့လုပျတာဖွဈသှားပွီ ။မွနျမာလူမြိုးမြားသျာ ထိုးကြှေးခံ ကြားစားမြားမဟုတျပါ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၄ နှဈ လောကျက ဆန်ဒပွရာတှငျလညျး တတျနိုငျသလောကျပါဝငျခဲ့ပါတယျ.ထိရောကျမယျဆိုရငျ သကျဆိုငျရာလူကွီးမြားကလညျးကွိုဆိုမယျဆိုရငျ BKK ထိ အသနားခံ တောငျးဆို ဆန်ဒပွပေးဖို့ အသငျ့ပါ။” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျမှာ ရေးသားဖျောပွလာတာပါ။
မွနျမာနိုငျငံသားတှဖွေဈကွတဲ့ ဝငျးနဲ့ဇျောရဲ့ အမှုကိုတော့ (၄) နှဈကြျောမြှ စဈဆေးခဲ့တာဖွဈပွီး နောကျဆုံးအယူခံကို ထိုငျးနိုငျငံတရားလှတျတျောခြုပျက ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ သွဂုတျလ (၂၉) ရကျနကေ့ သဒေဏျကခြံစရေနျ အမိနျ့ခခြဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ခဈြပရိသတျတှလေညျး တတျနိုငျတဲ့ဘကျက ပါဝငျပွီး ဝငျးနဲ့ ဇျောအတှကျ ဆုတောငျးပေးခဲ့ကွပါဦးနျော။